Naya Bikalpa | प्रेस काउन्सिलमा किशोर साम्राज्यको अन्त्य ! - Naya Bikalpa प्रेस काउन्सिलमा किशोर साम्राज्यको अन्त्य ! - Naya Bikalpa
प्रेस काउन्सिलमा किशोर साम्राज्यको अन्त्य !
प्रकाशित मिती: २०७७ आश्विन ९, १७: ०८: ५२
प्रेश काउन्सिल नेपालका कार्यवहाक अध्यक्ष गाेपाल बुढाथाेकी बायाँ, दायातर्फ किशाेर श्रेष्ठ
काठमाडौ – सामन्यतय लोकसेवा आयोगमा परीक्षा पास गरेर जागिर खाएको कर्मचारीको नोकरी अवधी २० वर्ष हुन्छ।फाैजी सेवामा प्रवेश गरेकालाई १८ वर्ष सेवा गरेपछि राज्यले पेन्सनकाे ब्यवस्था गरेकाे छ ।
देशमा राजनीतिक ब्यवस्था बदलियाे, राष्ट्र प्रमुख तथा मन्त्रीहरू समेत पटक पटक बदलिए तर जुनसुकै ब्यावस्था बदलिए पनि आमसंचार माध्यमकाे नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालमा किशाेर श्रेष्ठकाे साम्राज्य भने बदलिएन।
जुनसुकै सरकार परिवर्तन भए पनि उनलाई हटाउने सहास कुनै सरकारले गर्न सकेनन्, कतिसम्म भने कार्यवहाककाे जिम्मेवारी खाेसिएपछि किसाेर अदालत जान्थे र पुनः आफ्नै थमाैति लिएर काउन्सिलमा राज गर्न फर्किन्थे ।
प्रेस काउन्सिलकाे कार्यबाहक अध्यक्षबाट शुक्रबार राजिनाम दिएका किशोरले भने राजनीतिक नियुक्तिमा १४ बर्ष प्रेस काउन्सिलमा बिताए । नत उनले कुनै जागिरे परिक्षा पास गरे, नत विवादरहित बन्न सके ।
श्रेष्ठले प्रेस काउन्सिलकाे चार वर्षे अवधी सकिनुपूर्व तीन दिन पहिले शुक्रबार राजीनामा दिएका हुन् । उनको राजीनामापछि कार्यबाहक अध्यक्ष बनेका छन्, गोपाल बुढाथोकी । तत्कालीन अध्यक्ष भवानी बरालविरुद्ध सर्बोच्चमा मुद्धा हालेपछि २०७४ भदौ २ देखि किशोर कार्यबाहक अध्यक्ष थिए।
यसअघि सरकारले दुर्गा भण्डारीलाई कार्यबाहक दिएपनि सो निर्णयविरुद्ध किशोर अदालत पुगेका थिए। अदालतको अन्तरिम आदेशपछि उनको कार्यबाहक जोगिएको थियो। अध्यक्ष किशोरमाथि सबैभन्दा बढी आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोप बारम्बार लाग्ने गरेको थियो।
उनको कार्यकाल पुरै बिवादरहित बन्न सकेन। श्रेष्ठमाथि आफ्नै पत्रिका जनाआस्थालाई क वर्गमा पार्न आफ्नै हात जगन्नाथ गरेको आरोप समेत लाग्दै आएको थियो। अहिले कार्यबाहक अध्यक्ष पाएका बुढाथोकीको कार्यकाल २०७९ भदौ २ सम्म छ।
प्रेस काउन्सिलमा २०८१ भदौ १ सम्म अवधी बाँकी रहेकी दुर्गा भण्डारीको कार्यबाहक खोसिएपछि श्रेष्ठ कार्यबाहकमा मुद्धा मामिला गर्दै टिकेका हुन् । सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा परेका भवानी बरालको अवधी २०७८ जेठ ८ गते सकिदै थियाे ।
यो बीचमा मुद्धा फैसाल उनको पक्षमा आएमा बुढाथोकीको कार्यबाहक स्वतः खोसिने देखिन्छ। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको पदेन सदस्यको अवधी समेत गएको भदौ ५ बाट सकिएता पनि महसंघको नयाँं अधिवेशन नभएका कारण उनी नै सदस्य रहेका छन् ।
प्रेस काउन्सिलका अर्का सदस्य खिलाबहादुर भण्डारीको असोज १२ मा अबधी सकिने छ। अर्का सदस्य चेतनाथ धमलाको पुस ३ गते म्याद सकिने छ। सदस्य नवल किसोरको पनि ०७७ पुस २८ मा म्याद सकिदैछ।
अर्का सदस्य संगिता खड्काको माघ १८ मा म्याद सकिने छ। दिपक पाण्डेको २०८१ भदौ १सम्म कार्यकाल वाँकी छ ।
विवादै विवादमा किशाेरकाे जिम्मेवारी
जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशाेर श्रेष्ठका विवादका श्रृङखला अनेकाैं छन् । नायिका श्रृषा कार्कीकाे चरित्र हत्या गर्ने गरी जन आस्थामा आएकाे समाचारका कारण उनले आत्महत्या गरेपछि किशाेर भुमिगत बनेका थिए ।
साे प्रकरणमा जेल पर्ने डरले किशाेर तत्कालिन विद्राेही माओवादीकाे सम्पर्कमा पुगे । माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएसंगै किशाेर अन्तरिम सरकारकाे समयमा प्रेश काउन्सिलमा प्रवेश गरेका थिए ।
प्रेश काउन्सिलमा किशाेरकाे प्रवेश सँगै आफ्नाे स्वामित्वकाे जनआस्था पत्रिकालाइ सँधै पहिलाे नम्बरमा राख्थे , विराेधी र फरक आस्था राख्ने पत्रिका र लेखमाथि अंकुश लगाउने गर्दथे । काउन्सिलमा प्रवेशसँगै आफैले आफैलाइ कार्यवहाक ताेक्दै किशाेरले राज्यबाट राताे पासपाेर्ट समेत लिएर पटक पटक दुरूपयाेग गरकाे आराेप लागेकाे छ ।
संचारमाध्यमले आचारसंहिता पालना गरे नगरेकाे अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र आचारसंहिता उल्लंघन भए सच्याउन लगाउने र कारबाहीसम्मकाे सिफारिस गर्न पाउने अर्धन्यायिक निकाय काउन्सिलकाे जिम्मेवारीमा रहे पनि सार्वजनिक व्यक्तिकाे चरित्र हत्याका श्रृङ्खला उनी सम्पादक भएकाे पत्रिकामा प्रकाशित हुने गरेका छन् ।
शालिकराम सुवेदी आत्महत्या प्रकरणमा अनुसन्धानमा रहेकाे भिडियाे सार्वजनिक गरेर संचारकर्मी रवि लामीछानेलाइ थुनामा पठाउन किशाेरकै हात रहेकाे बताइन्छ,। अन्तत तिनै किशाेरकाे १४ बर्षे प्रेश काउन्सिलकाे यात्रामा भने अव तीन दिनपछि पूर्णविराम लाग्ने भएकाे छ ।
२०७७ आश्विन ९, १७: ०८: ५२